Life Style – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
စွမ်းအင်အဆင့် မြင့်တက်စေမည့် သဘာဝနည်းငါးသွယ်
မောပန်းပြီးနွမ်းနယ်တာကြောင့် စွမ်းအင်တွေလျော့ပါးနေရင် အချိန်တိုအတွင်း စွမ်းအင်အဆင့် မြင့်တက်လာစေဖို့ အောက်ပါသဘာဝနည်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) သင်နေထိုင်တဲ့ နေရာအ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ လိမ္မော်ရောင်၊ အ၀ါရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင်တို့လို တောက်ပတဲ့ အရောင်တွေရှိနေပါစေ။ ဒီအရောင်တွေက စိတ်ခံစားမှုကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၂) တစ်နေ့ ၁၅ မိနစ်ခန့်...
ယခုထက်ပိုမိုကျန်းမာစေရန် လိုက်နာသင့်သည့် အခြေခံနည်းသုံးသွယ်
(၁) နှစ်သက်သောဝါသနာကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ နေ့စဉ်ရိုးစင်းတဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံထဲမှာ သင့်ရင်ခုန်သံတွေ မြန်ဆန်စေဖို့ ၀ါသနာတစ်ခုခု၊ ပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းထားပါ။ ဒါက အသက်ရှင်ရတာ ပိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေပြီး ပိုမိုကျန်းမာစေတဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ပိုမိုလတ်ဆတ်သော အစာများကို တတ်နိုင်သမျှ အစိမ်းစားပါ သင့်ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်ချစ်သူကို ပိုကျန်းမာစေတဲ့ အချစ်ဟော်မုန်း အောက်ဆီတိုစင် ပိုထွက်ရှိလာစေမယ့် ရိုးစင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။ (၁) မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်ခြင်း ချစ်တဲ့သူအချင်းချင်း မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်ပြီး နွေးထွေးတဲ့ အပြုံးလေးပြုံးတဲ့အခါ အချစ်ဟော်မုန်း အောက်ဆီတိုစင်ထွက်လာပြီး ယုံကြည်တဲ့ခံစားချက်ကို အားပေးနိုင်ပါတယ်။...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်ခါတုန်းက ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိပါသတဲ့။ သူကသစ်သီးသီးမယ့် အပင်ပေါင်းများစွာ စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး သစ်သီးတွေ သီးလာတဲ့အထိ မပျင်းမရိ ပျိုးထောင်ခဲ့တယ်။ သူက သစ်သီးတွေကို ခူးဆွတ်ပြီး ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကို မိသားစုကို ပေးချင်ခဲ့တယ်။ သာယာတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ သူ့သားနဲ့အတူ...
လက်ဖ၀ါးကြမ်းကြမ်းတွေ နူးညံ့ချောမွေ့သွားစေမယ့် အိမ်တွင်းကုထုံး
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အခုလိုကာလမှာ လက်တွေကို မကြာခဏ ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးလိုက်၊ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ဆေးလိုက် . .တစ်နေ့တာအတွင်း အခေါက်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် လုပ်ပြီးချိန်မှာ လက်ဖ၀ါးတွေ ကြမ်းတမ်းလာပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက သင့်အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။...
———၊ လရိပ်မေ ၊——— တစ်နေ့မှာ အချိန်အနည်းငယ်လောက်ပေးပြီး ဘ၀တက်လမ်း တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ • သင့်အလုပ်လျှောက်လွှာကို လတ်တလောအောင်မြင်မှုတွေ ထပ်ဖြည့်ပေးပါ။ သင့်အလုပ်မှာ တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ပိုကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင် ထပ်မံလေ့လာပေးပါ။ • သင်တက်နိုင်တဲ့ နောက်ထပ်သင်တန်းတွေကိုတက်ပြီး သင့်အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပေးပါ။ •...
Page4of 257‹ Previous12345678Next ›Last »